Ubuwazi ukuthi ... "Ukubhala kahle kuhle"? | Izindaba zamagajethi
Ubuwazi ukuthi ... "Ukubhala kahle kuhle"?
Ukuvela kwamadivayisi eselula nokwanda kwamanethiwekhi athumela imiyalezo ngokushesha njengeWhatsApp noma iTelegram, kanye namanethiwekhi okuxhumana nabantu afana ne-Twitter, anomkhawulo wezinhlamvu eziyi-140, kuholele abasebenzisi abaningi kusuka kubuhlakani ukuze bakwazi ukuveza abakufunayo, ukubhala ngqo okungalungile, edlula e-Arc de Triomphe imithetho eyisisekelo nesisekelo kakhulu yesipelingi saseSpain.
Lokho esikubeka kubhulogi, ukuxhumana nomphakathi nabanye, kubaluleke njengephrojekthi yokugcina, kuyatholakala kunoma ngubani ukuthi akubone, futhi kufanele kubhalwe kahle. Ngalokhu, uWiko noLa Vecina Rubia bahlanganyele futhi baqala isicelo sokuthi, ngaphansi kwesihloko Ukubhala kahle kuhle, ihlose ukufundisa abasebenzisi be-intanethi namadivayisi eselula ukubhala kahle, kahle, ukuqwashisa nokufundisa, okuyinto abanye abantu abayidingayo ngempela.
Ukubhala kahle kuhle ... futhi kubukeke kahle, kubi futhi kubi, kukhuluphele futhi kuzacile, kumhlophe futhi nsundu ...
Uyasikhumbula leso sikhangiso sesiphuzo esidumile? Hhayi-ke, singasisebenzisa leso siqubulo lapha, ngoba ukubhala kahle kubalulekile, uma kungenjalo ukubukeka kungenangqondo. Sonke siyawenza amaphutha, futhi lapho ubhala ngokwengeziwe, maningi amathuba okuthi ulenze. Kepha kukhona amaphutha, namaphutha.
Ukubhala kahle kuhle kuyinto isicelo esisha «ithuthukiswe nge-glitter ukubhala kahle kuselula yakho futhi ube nezinwele ezinhle» lokho sekuvelile kusuka enyunyaneni yeWiKo, umkhiqizi wezobuchwepheshe, noLa Vecina Rubia, iphrofayili ebhuqayo kuTwitter enabalandeli ababalelwa ezigidini ezimbili futhi abakhathazeka kakhulu empilweni "ukuba nezinwele ezinengqondo ngaphansi."
Uhlelo lokusebenza manje selutholakala ku-Google Play Isitolo kumadivayisi we-Android, kunjalo ngokuphelele free nangendlela efundisayo. Inhloso, bakhomba ku-Wiko, ithi «yenza abasebenzisi bazi ngokubaluleka kokusebenzisa kahle isipelingi, ukubhala nohlelo lolimi ngokusebenzisa ama-smartphone".
Kungakho uhlelo lokusebenza lunikeza "Ama-rubitips" noma iseluleko ngemikhuba esemqoka yokubhalwa kwezilimi yolimi lwaseCervantes, «I-Rubiconsultas» ithunyelwe nguLa Vecina Rubia ku-RAE, eyethulwe yi-blogger kwiRAE uqobo, «Izinganekwane zeRubiurbanas» ngezinganekwane ezingamanga ngokusetshenziswa kolimi lwethu, futhi "Umdlalo wamaBlondes", umdlalo lapho uzokwazi khona ukuvivinya ulwazi olutholile.
Khumbula, ukuba muhle noma ukubukeka, ukuya emfashinini wakamuva, noma ukuba nezinwele ezinhle uHilario Pino angathanda ukuzenza, akuhambisani nokubhala kahle. Ngendlela, ngabe uzokwazi ukuthola iphutha lesipelingi engilifakile kulokhu okuthunyelwe? Bheka, sengize ngaliguqula laba bomvu?
Ukubhala kahle kuhle
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » Ubuwazi ukuthi ... "Ukubhala kahle kuhle"?
UBenjamin Doodle kusho
Yebo, bheka, uJosé: Ukuthi awudingi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza kuphela, kepha ngqo kusuka kusichazamazwi se-RAE, kanye nePan-Hispanic yokungabaza kanye neSpanishi-isiNgisi-iSpanish ngezikhathi ezithile.
Uzithumele iphutha elingaphezu kwelilodwa kulesi siqephu sendatshana esiyihlazo kakhulu.
Ngingahle ngingabi blonde noma ngibe muhle noma ngitwitwe noma ngidume mbumbulu, kepha ngiyaziqhenya ngokuqhubeka nokuthatha umsebenzi owanele wokunikeza imininingwane ngobukhulu obufana nobakho, obungenamahloni obufakwa yinethiwekhi.
I-PS: Kwakungesikhathi lapho i-platinum, okwenziwe ngemidwebo efanisa umsebenzi wokufaka okuthile entweni yabo ebusayo (ngakho-ke umphumela awuhlali noma uzwakale ucebile).
Ngibonga lutho, huh ?!
Sawubona Benjamin Garabato. Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho. Ngokungafani nawe, ngiyabonga ngisho nangalokho engingakuthandi, noma ngabe amagama akho akhombisa ukungabi nhlonipho okusobala. Kuyacaca ukuthi ukubhala kahle, okwenzayo, akufani nemikhuba emihle.
Ngale ndlela, lolu hlelo lokusebenza, noma ngabe awuluthandi, lumayelana nabantu ababhala kahle ngaphandle kokwenza amaphutha esipelingi noma wohlelo lolimi, hhayi ngokugcwalisa izichasiso ezingekho emthethweni ezingacacisi noma ezinikeze imininingwane.
Ngiyabonga ngokubulala izikhathi zakho zokucika ukugxeka okuthunyelwe kwami. Ngiyathanda!
I-PS: ngeSpanishi, isibabazo kanye nezimpawu zemibuzo zibekwa ekuqaleni nasekupheleni komusho. Futhi ngemuva kwekholoni, kubhalwe ngamagama amancane, okungenani ezimweni ezimbili lapho ukwenze khona ngokungalungile. Kungakanani ukukhuluma, kodwa-ke ...
Ngikushiya izixhumanisi ukuze kule mpelasonto uchithe isikhathi esincane ufunda yomibili le mithetho ngakho-ke, ngokuzayo, ungangeni esiwula: http://www.rae.es/consultas/ortografia-de-los-signos-de-interrogacion-y-exclamacion y http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=2a3yRXFBiD6rvDOMtq
A hug umfundi othandekayo!
I-Uber izoyeka ukusebenza eLondon ngoSepthemba 30